Magro Antsirabe : Entitra ny zanak’i Dada – MyDago.com aime Madagascar
Samy nilaza sy nanamafy ireo rehetra nitondra teny tao amin’ny Magro Antsirabe fa tsy maintsy mody i Dada na misy fihaonana na tsy misy ary tsy maintsy mirotsaka ho fidiana ary vonona ny handany azy ny vahoaka Malagasy, satria dia efa mijaly loatra ny vahoaka amin’izao fitondrana teteza-mitatra izao. Ny orinasa tokony hiasan’ny vahoaka Malagasy anaovana barofo sy mitady ho potehina, ny fandrahonana sy ny fanenjehana tsy mitsahatra andro aman’alina nefa fitoniana no tadiavina ka avelao hanao eo hahitany ny daoziny . Mahatsiaro ny asa vitan’I dada ny vahoaka ankehitriny ka tofoka sy leo amin’ity fitondrana FAT ity ; etsy an-danin’izay matoa misy fitokonana etsy fitokonana eroa dia midika izany fa efa tsy voafehiny intsony ny fitondrana ka tokony hametra-pialana ny tsy mahavita azy .
Tapi-dalan-kaleha ny FAT ka mitady izay handrazonana satria halohalika ny ranom-bary ; tsy mandry fahalemana ny tany vaky trano , herisetra, vono olona izany no re isan’andro na an-gazety na amin’ny radio na amin’ny fahita lavitra tsisy izay tsy mihorin-koditra ny malagasy vao amin’ny dimy hariva dia efa samy manidy mafy ny tranony , mitady filaminana ny Malagasy , mitady fiainana tsy misy romoromo mitady izay hohaniny ihany koa fa dia henoy izany ra hazon-damosina ; raha ry be boty sy ry be basy no mitaky dia mahazo avy hatrany eny fa na tsy mitaky aza dia omena ka dia mizity ery amin’ny fiara vaovao tsy mataho-dalana ny teto antsirabe aza moa vao nahazo dia nikiriorio eran’ny tanàna nefa tsy dahalo enjehina na mpangalatra hazana nahazo dia te ho deraina e ! .
Raha izany foana no avelantsika hanjaka eto dia ho farofy la i Madagasikara ka fotoanan’izao .Izany hoy ireo mpitarika nomahatonga ny tolona ho hamafisina sy ny hampodiana an’i Dada satria leo ny vahoaka .
Mbola teto amin’ny Magro Antsirabe avokoa moa ireo CT sy CST avy any amin’ny Faritra maro ka samy nankahery sy namporisika ny vahoaka hanohy ny tolona ary hanatevina izany isan’andro satria kely sisa dia ho afaka amin’izao fangirifiriana izao ny Malagasy.
Ny sabotsy izao indray ny fotoan’ireo zanak’i Dada etsy amin’ny Magro Avaratsena
22 réflexions sur « Magro Antsirabe : Entitra ny zanak’i Dada »
Iza tokoa moa no tsy ho leo sy tsy ho tofoko ary tsy ho tezitra amin’izao hanihany sy vanivany ataon-drajoelina izao…izay mitady irika kely foana ivoaka ny vovo mamefy azy?
Sao Isika kosa no tsy mahery vaika sy tsy manery mafy ity jiolahy ity ka hafahany mandosindositra sy mitranga lela Amintsika..
Heveriko fa tokony hiezaka ny SADC hanidy ny ny làlana sy ny hanentsina sy hanototraototra ny lava-boalavo izay mety hitsoahan6drajoelina..§
Heveriko fa ny fihaonana nangatahan ‘ny Filoha RAVALOMANANA MARC DIA HETSIKA hentitra
hanafainganana ny fanasoniavana ny tondrozotra.!Koa raha manao izay fomba rehetra tsy hanantareha izany rajoelina dia tsy nahona ny SADC no tsy mampiasa « ny fepetran’y sanctions internationales » izay tokony HANERY AN-DRAJOELINA TSY HANDEHA ATSY SY AROA ?
Izao famelàna an-drajoelina hivezivezy izao ve tsy mitory fa olona hafaka i rajoelina ary Isika dia andevony ?
NY SADC DIA TSY NISALASIA NITRERONA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IZAY NITADY HODY ANTANINDRAZANA ARY NANDRARA AZY TSY HAMERINA IZANY FANANDRAMANA HODY IZANY §
RAHA HOHARINA AMIN’ NY FIHETSIKY NY SADC MANOLOHANA NY FANALIKANA NY SADC
ATAON -DRAJOELINA IO FANDRARANA NY FILOHA TSY HODY IO DIA MISY FIANGARANA ARY HEVERIN’NY SADC FA « GADRANY 3 NY FILOHA RAVALOMANANA MARC !
Tena mijaly ny mpirai-tanindrazana, ny vahoaka malagasy, kanefa dia ho lanilaniana amin’ny fisekoana sy ny haitraitra indray ny volam-bahoaka !
Fety hono ny andro, ary hiosanosana tavin-kena sy higoka ny mpanongana, kanefa ny vahoaka maina kina, na dia ny hividianana hena kely sy anana aza tsy misy !
Nisy resaka efa nalefako ihany teto andro vitsivitsy izay, momban’ny fanampiana an’ireo mpitolona any an-toerana, fa tsy tadidiko hoe tao amin’ilay sujet inona ilay izy.
Noho izany, dia ho an’izay mba mahatsiaro an’ireo malagasy mpiray tanindrazana, ho an’izay mba te handray anjara amin’ny fanampiana, dia ao amin’ny SITE-N’NY TIM ILAY FAMPANDRENESANA SY FIANTSOANA !
JEREO AO ILAY SUJET HOE : ANTSO !!
Tsy an’ny olon-dratsy ny adidy, ary ny « fitia tsy mba hetra » marina !!!
Ny dadan-drangahy ane ry KM laniny hanakaramana asa fampihirohoroana sy asa fanakoron-tanana, asan-dahalo sy jiolahy ho entina hi-déstabiliser na ny fitondrana ny volany, kanefa Zandrinay mijoro tsy voahongozony mihitsy e! fa maninona ary nareo mianakavy, zanak’i dada ireto, no tsy miara-mitaky @ndrainareo be vola be iny, no ny gasy sahirana ndray no hitadiavana hanaovana tsipaipaika. Zany ane woa ny mahahafahafa ity tolonareo ity e! ny hamerina an-dRaosy eo @ sezany izay be vola indray, no hanaovana tsipaipaika, hanerena ny mafiady, hamatsiana ny magroreraka, alors que, le dadany tsy mahafoy na de jus iray tavoahangy aza. Tsy hay na tahotra an-dRaosy, na hena-maso, fa amiko ny marina de manafina ny toetran-drainy ireto, fa zay mitetateta mangataka eo, tonga de voan’ny roaka mopera, miampy teny gasy, an!an! teny ratsy!
Mba iza t@ireto zanak’idada ireto, no nahasahy niteny ny tsy nety nataon-dRainy, na nangataka fanampiana taminy @ filana vola ny tolon’izy ireo, hahazoan-dRaosy seza?
Zay koa ny antony iray mampihitsoka azy @ gena any, lany hanaovana asa ratsy ny vola, de ataon’Andriamanitra fay tsy mahatanteraka ny asa sy ny sain-dratsiny.
De mitomania mafy ry zazasary fa dada raikelinareo tsy te hahalala anareo izany a! raha tsy izany ve, mihena an-toerana sy mai-molotra lava, ny antitra sisa tavela eo @ magroreraka e! mba mandiniha tena ihany woa! ny olona ane mandroso foana e!
Misaotra Kintana!!tena mboal sahirana mafy aho io fa voaray ny hafatra e!!
Aza mba ny ray aman-dreniko efa nodimandry no anaovana resa-ke ato, fa mbola tsy nisy niteny an’ialahy mihitsy teto hoe manao makorelina eny amin’ny Bois de Boulogne ny rain’ialahy sy ny renin’ialahy ry rabe !!
Arovanay tsara io Tiko io fa misy voly can…à bus hanaovanay concours @bolivie ao
O ry ry Kintana a !
Kou efa hoe Sônada sy Ra Pauline ilay mifanao ambony ambany kou hiady @ adala ve ?
Mahamenatra ny polémique amin’ny zavatra tsy misy dikany !!! mba ny HOAVIN’NY FIRENENA resahana ka raha manantsaina isika manoratra ato dia izay mahasoa ny Firenena resahana fa efa TELO TAONA izay!!!ary mbola resaka mirefarefa foana no hita ato amin’ny forum.
Tsy mahagaga raha tsy mandroso ny firenena fa mbola miaina ny fomba fanao fahizay 60 taona lasa!!!
Aza modina tsy fantatra na modina tsy hita fa olona DONDRONA SY MPANARARAOTRA ARY MPANGALATRA ireo amin’ny fitondrana ireo (coup d’état no nahatonga azireo teo) .
HATAOVY NY FIFIDIANANA ary avelao izay te hilatsaka ho fidina hilatsaka tahaka ny Prd Marc Ravalomanana dia ho hita eo izay mandresy sy lany IZANY NO DEMOCRATIE ry havako rehetra ,fa ny polémiques tsy mitondra makaiza efa TSY NAHAVOKY ny Malagasy hatramin’izay… NY FETIFETY (26 Juin) ISA TAONA VE DIA MAHAVOKY? sa ny lalana ve no mahavoky? mba tsara haverina ny fanontaniana?
MISY FARANY DAHOLO NY ZAVATRA REHETRA fa hoavy ny fotoana hanaovana AMPAMOAKA avy aiza ny vola nanaovana coup d’état sy ny vola handohavana ny karaman’ny fonctionnaires malagasy fa BETSAKA NY VOLA SANDOKA MANDEHANDEHA eto Madagasikara? ary fantatra tsara fa lazaina fa aviamin’ny frantsa tamin’ny andron’i SARKOZY!!!
MBA SOKAFY NY SOFINA SY NY MASO RY MALAGASY!!!
mba aoka kely aloha ity hata-pison-ny malagasy ity e ! raha te hifanampy dia aoka aloha hiray hina daholo, miara mirona hampisehona fa vonon-kiady amin’ny fahafahana. Eo no ahitana hoe mila fanampiana sa tsia, fa izy ity ohatra ny resaka kibo tsetsemana foana.
Aiza marina no hiray hina aloha ? ohatra jereo firy ny tranokala mirantiranty isan’andro , tsy rariny, firy ny olona eo amin’ny Magro, firy ny olona mimenomenona eny andalambe, firy ?
90% ny malagasy na eto antoerana na any ivelany.
Aiza no hiray hina hanao ady tokana ?
Efa araraotin’ny foza amin’ity tsy firaisankina ity dia manohy ihany.
Ny firaisankina no mampazoto fa tsy ny vary iray vilia nangatahana etsy sy eroa.
ny tena loza dia mety mody mitonona ho gtt daholo izay te-hisoloky fa noana dia noana.
Tsy hay intsony iza no iza .
Izay tena mpitolona hatr’izay ela izay ry elas mahafantatra hoe, iza avy no tena nanao zavatra sy tsia â ! Tsy mora ny manao zavatra. Ny ankabeazan’izy ireo mifankafantatra daholo !
Amiko, ho an’ireo izay afaka sy mazoto, ny tsara angamba dia ny manantona an’ireo mpiandraikitra !!
Nisy ohatra fizaram-bary natao tao amin’ny Magro, ary nivoaka tato amin’ny MyDago ny sarin’ireo olona nilaha-bary tamin’io andro io ; mino aho fa mba faly ihany ry zareo nahazo an’izany fanampiana kely izany, ary ANISAN’NY FANAMPIANA AVY ATY IZANY, na dia mbola olona vitsy dia vitsy aza no nandray anjara tamin’izany.
Ilay hahihahy sy ny mifampiandry lava, no tena hitako tsy dia mety angamba !
Mety ho diso ny hevitro, fa raha izaho manokana indray dia midera sy misaotra an-dry zareo rehetra mpikarakara, mahafohy andro sy hery amin’izany fikarakaràna izany.
Ny TIM sy ny GTT no nitondra ny hevitra sy manantanteraka an’io, koa raha misy fikambanana hafa te hanampy, inona indray moa no olana amin’izany ? Tsy izany ve no atao hoe firaisan-kina ?
Pas de fleuve sans rivières ni ruisseaux !
Faly mahare vaovao ohatran’izao ry Kintana.Mankasitraka, eo foana izahay.
Mijaly ny vahoaka, i domelina mitonatonana toy ny vinanto tsy mahare-fosa, mandany volam-bahoaka !
Oui, ils n’ont plus de riz
Mais je m’envole au paradis
Mon voyage doit faire plus de bruit
Du carnaval ?
Je m’exerce dans la foule
Et cette réunion, c’ sûr qu’elle me donne des ailes
Je vois des dentelles
Ô mer.., je suis riche de rêves
Comme le sont ces gens pauvres
22 juin 2012 à 14 h 02 min
Mazav kosa angamba izao ny paikadin’ny C.I – ONU – SADC…sy izay « instance » afa.azo handrebirebena antsika.
Ahoana moa no hitsofoany olona mety hanampy antsika raha tsy misy malagsy vonona hampiasa izany e?
Masinteny ô!Ratsimilaho ô! Tarito izay drafitra ilaina marina e
Inona kay Randria no andrebireben’ny ONU antsika?ataoko ity vao haingana i Domelina no tsy nahazo rirany tamin’i Ban ki Moon sy ny filoha angolais.
iza marina ny tomponanandraikitra fa angamba ny fitolomana no tsy mitovy.
tsy olana veliveky ny fizaram-bary fa ny tena olana goavana dia tsy hifampizara vary eto akory mandritra ny 10 taona dia i tgv eo ihany, jereo ity izy manao kabary tsara lahatra any brésil, eny fa na izay voalaza ary paokaty.
N’aiza n’aiza hijoron’io jiolahy io, dia ny fikambanana mpitolona malagasy afaka mitaraina manohitra ary manery ny firenena mikambana.
Raha misy ny firaisankina ka mitovy ny tanjona hitolomana, dia azo lazaina fa misy sofina ny vaza-tany 4. Ny tiako ho lazaina dia rehefa mitolona tokony tsy hibitsibitsika na hifampidera iza no mahavita be fa tokony hiray hina ary MITABATABA
22 juin 2012 à 18 h 44 min
Tsy fanakianana ny resakao ny nataoko fa fanazavàna ry elas.
Ireo izay efa nitolona atramin’izay no tompon’andraikitra, na atao hoe mpitarika. Izay angamba no marimarina kokoa, entina hamaliana ny fanontanianao !!
Ianao ve aloha ao an-toerana sa aty ivelany ?
Ny fizaram-bary ( sy hen’omby masaka ???), dia tsy manakana an’izay zavatra hafa TOKONY HO ATAO ! Izany zavatra izany dia hiarahan’ny rehetra midinika. Izay angamba no azoko lazaina aminao, fa ny tsara hoy aho dia ny manantona an-dry zareo mpikarakara na manotrona an’ilay fihaonana !
Impiry moa ny tenako nilaza teto fa ny malagasy izay mba afaka manohana ny tolona, tsy mba hita mihintsy fa rehefa RNS dia mahavita manao kilaometatra maro, mandany vola be sy mizesta hoe « izahay koa mba aty », sy mifampidera daba ?
Samy manana ny fomba fahitàny ny zava-manjò an’ilay firenena koa moa ny olona, ary marina fa eo ireo andihan’olona izay milaza ny tenany fa mitolona, fa asa mitolona sy mitaky inona ? Hiaraha-mahita ireny hetsika etsy sy ero ireny fa toa zavatra tsy mazava firy no tadiavin’ny sasany fa tsy ny fiverenan’izany atao hoe firenena tan-dalàna izany !!
Kivy ny tena isaky ny mamaky gazety !
Isika miray hina foana e! Izahay efa ela dia ela no tsy nandeha RNS satria efa tsy tanora intsony no efa niova ny toe-tsaina.Ary marina io lazainao io.
Manaraka izany, dia efa mba nandroso ny hevitray ihany izahay fa tokony hisy ny atao hoe « cohésion politique » mba hahafahana manangana drafitra miaraka mba hiverenan’ny ara-dalàna.Mety azo atao amin’ny forum hafa koa izany (TIM na lafy8). Dia manantena ny hevitry ny rehetra.
23 juin 2012 à 21 h 23 min
tena marina ilay resaka RNS, isan-taona hatraminy 2009 efa nanamarika anio teto ary nanampy koa fa ny malagasy rehefa hilanonana sy hihinana dia mahavory olona.
sady tsy eto an-toerana aho no tsy any ivelany fa eto amin’ny My Dago, ary manaraka ny zava-misy. Mba havanana amin’ny fiadiana rehetra ihany fa ilay resaka malagasy dia tena very. ohatra 1, be dia be ny fivondronana fa tsy fantara hoa iza no manao inona, ohatra 2 manao fitokonana daholo fa samy manao ny azy, ohatra manao antso amin’ny fanampiana saingy tsy fantatra hoe iza ilay handrotsana.
Ny malagasy koa efa kenda ka be ihany no mamitaka sy misoloko, koa dia there are more questions than answers or actions. for me, of course
Rehefa tsy mahalala ny fahoriam-bahoaka ity fanjakana tetezamihitatra ity, rehefa ty azo ifampiresahana ny « mpamory hetra » amin’izao tetezamhitatra vokatry ny fnonganam-panjakana izao dia tsotra : samia mivavaka mafy sy miketrika mafy ary mihetsika mafy mb hidarabohany ! Io fa efa mivoraka satria na dahalo aza tsy sahin-drafanjakana samborina ! Hodomintsika kely io dia mirodana !
rehefa vonona ny mpiandraikitra rehetra hanakarama andian’olona hamono ilay loham-poza kely endaka, ka manao antso avo mangataka fanampiana ara-bola dia maro dia maro ny handrotsaka tsy mihambahamba.
Satria fantatra fa ho vita ny kirizy, hilamina ny tanàna ary hadio ny rivotra hiainana.
Ary na samy mahantra aza dia samy ho sambatra sy milami-tsaina.
tokony handroso amin’ny ady mahery vaika fa leo tena leo.
-iza no masahy milaza fa na omena fahaleovan-tena aza ny malagasy dia ahavita tena ?
-iza no afaka milaza fa olona manaiky hitsakitsahana dia hahay hitandro ny maha izy azy ka tsy hisy handrebireby intsony mandrakizay ?
– iza no masahy mandaha fa ny malagasy no olna farany izay malemy eto an-tany ?
– iza no masahy minia fa ny malagasy dia malala fomba be loatra, mitsiky foana na osorana t a y aza , manaiky foana raha vao misy mandidy fa any ambadika minaonaona.
ilay 26 juin ve tokony hanaovana fety sa fotoana hieritreretan’ny be sy ny maro ?
tsy omena tsiny fa ny fitaizana angamba no misy indro kely, fa raha ny ho avy dia mahalasa fisainana
Efa mitady hivadika ho Jiolahy mpamono olona mitovy amy de8 koa ange ry Elas izany e. De8 ange efa nanakarama hamono an’io zandrikely io foana fa tsy nahavita e.zao indray dia manakarama dia efa manakarama ny dahalo aty atsimo.
conseil ry Elas a, ho mpiray tsikombakomba amin’ny mpamono olona toa ny de8 ianao, ary hivadika ho assassin mihintsy aza, koa mba ajanony ity fanatisme ity.
Précédent Article précédent : RAVELOSON CONSTANT : MIDONA AMIN’NY RINDRINA RAJOELINA
Suivant Article suivant : TSY MAHAFANTATRA AFA-TSY RAVALOMANANA MODY ISIKA